Vaovao - fonosana-vavahady-600-vavahady
Fomba fitehirizana fonosana valva:
Ireo mpameno an'ity tetikasa ity dia matetika misy ireto fitaovana roa manaraka ireto: PTFE sy grafite malefaka.
Rehefa tehirizina dia asio tombo-kase anaty kitapo na boaty. Tehirizo tsara ao amin'ny trano fanatobiana entana maina sy misy rivotra, ialao ny tara-masoandro. Tandremo ny rivotra mandritra ny fitehirizana maharitra, ary fehezo ny mari-pana amin'ny toerana fitahirizana mba tsy hihoatra ny 50 ° C hisorohana vovoka be loatra. Raha esorina sy ampiasaina ny vovoka mipetaka amin'ny vovonan'ny famenoana, esory amin'ny lamba madio.
Fomba fanoloana valve valve:
Toy izao manaraka izao ny tombo-kase famonosana: 1). Fonosana famatrarana voa, 2) Swing bolt, 3) raikitra pin, 4) fonosana, 5) fonosana fonosana, 6) fonosana tsindry lovia (indraindray 5 sy 6 dia ampahany tsy miankina amin'ny bobongolo ary voafaritry ny toe-piainana samihafa, ny asa ankapobeny dia mitovy amin'ny an'ny fisarahana)
Ireto ny dingana fanoloana tombo-kase:
1. Mampiasà maketaheta mba hanesorana 1) ny voanjo famatrarana famonosana ary hampiakarana azy 5) ny fonosana fanontam-pirinty ary 6) ny lovia fanontam-pirinty, mamela toerana ho an'ny fiasa fanoloana ny fonosana.
2. Mampiasà visy manify na ravin vy hafa hanalana ny fonosana tany am-boalohany ary soloina vaovao. Raha ampiasaina ny famonosana entana, rehefa mametraka ny fonosana vaovao ianao dia tandremo fa ny lalan'ny fanapahana entana dia tokony hivezivezy 90 ~ 180 °, ary ny zoro tafiditra dia tokony haverina tsiroaroa. Aza manana overlaps matetika amin'ny lalana mitovy amin'ny aseho amin'ny sary;
3. Rehefa avy nametraka fonosana sahaza azy dia avereno 5) ny fihary ao anaty fonosana ary 6) fametahana takelaka fanindriana. Rehefa mametraka, tandremo ny toeran'ny tombo-kase fametahana sy 6 ~ 10mm lalina ao anaty fonosana valva (na 1.5 ~ 2 heny ny hatevin'ny fonosana) toy ny fanondroana toerana (Araka ny aseho etsy ambany).
4. Mamerina 1). Famonosana ny tsimok'aretina famonosana, 2) Hamafiso ny toeran'ny fametrahana ny baorira iraisana mandra-pahatongany any amin'ny 20% amin'ny famatrarana famonosana.
5. Rehefa vita ny dingana etsy ambony dia manaova fanaraha-maso manan-danja amin'ny valva izay nanolo ny fonosana amin'ny fampiasana manaraka raha toa ka ilaina ny mampitombo ny preload amin'ny fonosana.
Fanamarihana: torolàlana momba ny fanamafisana indray sy fanoloana fonosana eo ambany tsindry.
Ireto manaraka ireto dia asa mampidi-doza. Aza manandrana kely azy ireo raha tsy ilaina izany. Azafady araho tsara ity antontan-taratasy fitarihana ity mandritra ny dingana fandidiana:
1. Ny mpandraharaha dia tokony hanana fahatakarana manokana momba ny milina sy valves. Ho fanampin'ireo fitaovana mekanika takiana, ny mpandraharaha dia tsy maintsy manao fonon-tànana miaro hafanana, ampinga tarehy ary aroloha.
2. Misokatra tanteraka ny valva mandra-pandaitra tanteraka ny tombo-kase ambony amin'ny valva. Ny fototry ny didim-pitsarana dia ny mekanisma fiasan'ny valizy tsy afaka manainga ny vodin-tsofina intsony, ary tsy misy feo tsy ara-dalàna amin'ny vatan'ny valva.
3. Ny mpandraharaha dia tokony ho eo anilan'ny toeran'ny tombo-kase fametahana na toerana hafa izay tsy afaka vinavinaina. Fady mafy ny miatrika ny toeran'ny fonosana. Rehefa mila henjana ny fonosana dia ampiasao makarakara hanenjana 1) fonosana famonosana, 2 ~ 4 nify, ny andaniny roa amin'ny voan-tsindrona famonosana Mila vonoina, fa tsy ny lafiny iray fotsiny.
4. Rehefa mila soloina ny fonosana dia ampiasao fitaovana enti-miasa hamaha 1) fonosana famonosana, 2 ~ 4 nify, ny voanjo famatrarana famonosana amin'ny lafiny roa dia mila vonoina mifandimby. Mandritra io vanim-potoana io, raha misy valiny tsy ara-dalàna avy amin'ny vatan'ny valva, atsaharo avy hatrany ary avereno ny voanjo, tohizo ny Fandehanana ny rafitra fiasan'ny valizy mifanaraka amin'ny fomba fanao amin'ny dingana 2, fenoy ny tombo-kase eo amin'ny vatan'ny valva mandra-pahombiazany tanteraka, ary manohy manolo ny fonosana. Ny fonosana fanoloana eo ambany fanerena dia tsy avela hosoloina tanteraka raha tsy amin'ny toe-javatra manokana. Ny habetsaky ny fanoloana dia 1/3 amin'ny totalin'ny entana. Raha tsy azo atao ny mitsara dia azo soloina ireo fonosana telo voalohany. Rehefa vita ny fametrahana dia avereno amin'ny laoniny ny fametahana takelaka fanontam-pirinty 5 sy ny lovia fanaovan-gazety 6 famonosana. Rehefa mametraka, tandremo ny toerana misy ny tombo-kase fametahana sy 6 ~ 10mm lalina ao anaty fonosana valva (na 1.5 ~ 2 heny ny hatevin'ny fonosana) ho toy ny referansa fametrahana. Ampodio 1). Fonosana famonosana voa, 2) Hamafiso ny fametrahana ny toeran'ny bolt iraisana ho 25% amin'ny famatrarana faran'izay betsaka ao anaty fonosana. Raha tsy misy famoahana ao amin'ny fonosana valiny ambany dia vita izany. Raha misy fivoahana dia araho ny fomba fanao ao amin'ny dingana 2 sy 3 mba hanamafisana.
5. Ireo dingana fiasa etsy ambony ireo dia tsy natao afa-tsy amin'ny fisondrotan'ny valizy miakatra toy ny: fiakaran'ny vavahady fidinan'ny vatan-kazo, fiakarana fijanonan'ny tahony, sns., Tsy azo ampiharina amin'ny valizy maizim-pito sy tsy mitraka toa ny: valizy vavahady mainty, maizina vodin-tseranana fijanonana, valizy lolo, valves-bolo ary sns.